Timaha qallalan iyo kuwa cilladaysan, markay hawadu qallalan tahay, marwalba waad maqli kartaa dhawaqa dhawaqa taagan “papapa”, fool xumo, raaxo-darro iyo xumaan.
Timaha jilicsan ayaa kugu farxi doona, isla mar ahaantaana, waxaa jiri doona niyado badan oo lagu raaxeysto daqiiqada.
Si kastaba ha noqotee, waxaad isticmaashay qaboojiyeyaal badan iyo waji-bixin timo, laakiin saameyntu weli sidii loogu talagalay ma aha. Ma ka fikirtay iskudayida hababka daryeelka timaha cusub?
Timaha XARUNTA TIRADA
DOZRAN - saliida nafaqada leh ee nafaqada leh
Timaha daryeelka timaha leh saliido badan oo qaali ah
Daryeelka nafaqada timaha ee lagu sameyn karo guriga kama yara waxtar yar marka loo eego “xirmada nafaqada” ee dukaamada miisanka barakeysan, oo ka sii habboon oo caafimaad badan.
Ma ogtahay in marka lagu daro wajiyada, daryeelka maqaarka jirka, iyo aromatherapy, saliidaha lagama maarmaanka ah in sidoo kale loo isticmaali karo daryeelka timaha, kaas oo kobcinaya timaha iyo timaha gabi ahaanba, si timuhu u siman yihiin una qurux badan yihiin, u kobciyaan maqaarka, una xoojiso maqaarka. xididdada timaha.
Daaweeyeyaasha udgoonku marwalba way jecel yihiin kuna fiican yihiin xallinta dhibaatooyinka saliidaha lama huraanka ah, sababtoo ah waxay doorbidaan waxyaabo dabiici ah, caafimaad iyo qurux badan. Marka laga hadlayo timaha, waxay yidhaahdeen: Dabcan, waxaa lagu xallin karaa saliidaha lama huraanka ah!
Dhibaatooyinka nafaqada ayaa ah dhibaatada ugu weyn ee timo qallalan
Timaha qallalan way fududahay in la laabo, taas oo macnaheedu yahay in nolosha timaha la hanjabay, sababaha badankoodana waxaa sabab u ah nafaqo la’aanta oo aan ku filneyn, taasoo keentay biyaha, borotiinnada iyo walxaha kala duwan ee raadku ku dhacayaan, taasoo timaha timaha u hagaajisa isla markaana tayada timaha ay waxyeelleeyaan.
Daryeel aan habooneyn sidoo kale waa mid ka mid sababaha timaha qalalan. Dhaqitaanka oo aad u badan iyo dheeha perm joogto ah waxay kaloo sababi kartaa waxyeelo timo, iyagoo timaha ka dhigaya mid jajaban oo qalalan.
Cadaadis shaqo oo xad dhaaf ah, gaar ahaan kuwa kuwaasoo inbadan kombuyuutar adeegsanayey, yeela feejignaan sare. Waqti ka dib, maskaxdu had iyo jeer way ku farxi doontaa.
Sidaas darteed, nidaamka endocrine ee la xidhiidha koritaanka timaha ayaa la saameeyaa, taasoo horseedaysa dheecaanka qulqulka xad-dhaafka ah ee galmada, xanniba timaha timaha, iyo timaha ka dhigaya mid qalalan oo qalalan.
DOZRAN - saliida nafaqada leh ee nafaqada leh, oo lagu dhex daro saliidaha lagama maarmaanka ah ee kala duwan, waxay si wax ku ool ah u kobcin kartaa timaha iyo timaha timaha waxayna kaa caawin kartaa timaha inay soo celiyaan dhalaalaya, dheeri, buuxnaan iyo adkaan.
Maaddooyinka saliidaha lagama maarmaanka u ah si ay si buuxda ugu dhammaystiraan nafaqooyinka looga baahan yahay timaha
Waxyaabaha qaarkood ee ku jira qaboojiyeyaasha dhaqameed way fududahay inay kusii nagaadaan madaxa, taasoo keenaysa in timaha timuhu isku xidhmaan, sababaya in ay dufanka iyo timaha soo baxaan.
Qaboojiyeyaal badan ayaa liidata, oo waa lagama maarmaan in ay la xiriiraan madaxa madaxa inta la isticmaalayo, taas oo dhaawici doonta muddo dheer.
DOZRAN - saliida nafaqada leh ee nafaqada leh, kuma jiraan saliidaha silikoon, nuxurka iyo waxyaabaha kale ee ka kooban. Waxay ku saleysan tahay saliidaha qaaliga ah ee dabiiciga ah waxaana si toos ah loogu dabaqayaa timaha. Waxay sameyn kartaa lakab kahortag ah oo saliidaha lama huraanka ah leh, iyadoo dib loo buuxinayo nafaqaynta timaha, waxay sidoo kale soo celisaa timo burbursan.
Walxaha mowjadaha saliidda leh ee udgoonku waxay kaloo dhiirrigelin karaan wareegga dhiigga ee jidhka bini-aadamka, xasilloonaan karaan xaaladda maskaxda ee aan xasilloonayn, isla markaana ilaalinaysa caafimaadka jirka iyo maskaxda.
Waa maxay sirta ah ee DOZRAN - saliida nafaqada leh ee nafaqada leh?
// Cuntada ku jirta //
Marka la barbar dhigo kiimikooyinka ku jira qaboojiyeyaasha dhaqameed, daaweeyeyaasha aromatherapy dabiiciyan waxay door bidaan in ay isticmaalaan saliidaha lagama maarmaanka ah ee caafimaad iyo dabiiciga ah si loo gaaro ujeeddada qaboojinta timaha. Xulashada qaaciddada saliida lagama maarmaanka u ah dabiiciyan waa mudnaanta koowaad.
Si loo gaaro saameynta maskaxda ee maskaxda, kooxdii daweynta dabiiciga ahayd waxay si isdaba joog ah u tijaabinayeen oo wax uga beddeleen qaaciidooyinka, waxayna ugu dambeyntii go'aansadeen inay u isticmaalaan saliidda canab guurka iyo saliidda qumbaha inay yihiin saliidda nafaqada aasaasiga ah. Saliida xidid ginger, saliida caleenka, saliida ylang-ylang oo ah saliida saamaynta. Si wax looga qabto timaha qallalan, frizz, fududaanta dhicista iyo arrimo kale, samee daaweynta bartilmaameedka.
Saliidda canab iyo saliidda qumbaha siin kara nafaqooyinka lagama maarmaanka ah timaha, iyo saliidda caleen rosemary timi kara timaha oo timaha ka dhigi kara mid jilicsan oo jilicsan.
Saliid xidid ginger hagaajin kartaa timaha qallalan oo kala go'da, iyo Ylang Ylang saliid timaha ka dhigi kara mid madow oo qurux badan.
Saliidaha lagama maarmaanka ah sidoo kale way awoodaan bogsii jirka iyo maskaxda intaad timaha ilaalinayso. Moodiyamka udugga leh ee udugga leh waxay geli karaan jirka iyagoo adeegsanaya dareenka urka iyo maqaarka, taas oo waxay yareysaa daal iyo xasilloonida niyadda. Quudin, dibedda ilaa gudaha.
Haddii aad ku adkaysato isticmaalkiisa muddo ah, timo engegid, dhamaadka kala go ', iyo frizz oo ay sababtay qurxin iyo dheeh waa la hagaajin karaa ilaa xad.
Isticmaalka muddada-dheer wuxuu ka dhigi karaa timaha mid adag, jilicsan oo dhaldhalaalaya, isla markaana u kicin kara caraf qurux badan oo dabiici ah.
Khibrad daryeel timo oo cusub, diyaar ma u tahay inaad iskudaydo?